Sommerro - Jonsvatnet. - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguBenedickte & Mads
I-94% yeendwendwe zakutshanje inike uBenedickte & Mads iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yonwabela ukuzola okuza kunikelwa yikhabhathi, umgama omfutshane wemizuzu eli-15 ukusuka kumbindi wesixeko saseTrondheim. Igama leekhabhini, iSommerro, linokuguqulelwa ngokuthe ngqo kwi "Summer Calm", ehambelana nale ndawo ngokugqibeleleyo. Ikhabhini ineminyaka elikhulu ubudala kwaye ikwimeko efanayo ngendlela eyayakhiwe ngayo - ingenawo amanzi abalekayo/imibhobho yamanzi. Umbane usanda kongezwa. Ibekwe phezu kwenduli encinci, ngombono we-Litjvatnet-lake, apho unokufumana khona zombini i-trout kunye ne-pike.
Ukuza kuthi ga ngoku, kukho igumbi elinye kuphela lokulala, elinebhedi enkulu elingana nokumkanikazi, kunye nesofa ekhululekileyo kwigumbi lokuhlala. Nangona kunjalo, sinendawo ephakamileyo encinci eya kuthi, ekugqibeleni, ibe yindawo yokulala eyongezelelweyo. Kukwakho neofisi encinci, enombono wechibi, kwabo bathanda ukuza nomsebenzi wabo. Mhlawumbi unencwadi ekufuneka uyigqibe, kwaye ufuna umoya ofanelekileyo wokwenza oko?
Emva kokuhlala enje malunga nenkulungwane, uSommerro uye wadlula kwezinye iinguqu, kwaye umntu ngoku uyakwazi ukonwabela ubunewunewu obungumbane. Kukwakho indawo yomlilo kunye ne-oveni, eya kongeza zombini ubushushu kunye nomoya opholileyo - okanye 'koselig', njengoko sithetha eNorway. Igumbi lokuhlambela lilandelayo kuluhlu lwethu ‘lokwenza’, kodwa kwezi ntsuku kukho nje indlu yangaphandle enendlu yangasese yokutshisa. Indlu yangaphandle iqhelekile kwiikhabhinethi zaseNorway, kwaye yongeza iitoni zomtsalane - ukuba uyasibuza.
Amanzi ethu siwakha kumlanjana okufutshane, sihlambe izitya ngezandla, size sihlambe imihla ngemihla ngamanzi kunye netawuli/ilaphu. Yonke yeyakudala, kodwa yindlela thina bantu baseNorway esizithanda ngayo iikhabhinethi zethu.
Kunyanzelekile ukuba udlale umjikelo wemidlalo yebhodi xa ukwikhabhathi, kwaye sinezinto ezininzi onazo, ukuba nje uyibuyisela ngendlela oyifumene ngayo.
Ekuphela kwabamelwane bethu ziifama, kunye neekhabhathi ezimbalwa ebezingenamntu kangangeminyaka. Ke, kukhuselekile ukuthi yindawo ethe cwaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Benedickte & Mads
Ukuba sisedolophini siya kukwazi ukukubonisa iintambo, kungenjalo siya kushiya isitshixo kwibhokisi yesitshixo, kwaye senze unxibelelwano oluseleyo ngefowuni nganye.